Okuyisisekelo nomgomo wokufudumeza kokufakwayo, yini ukushisa lokungeniswa
Okuyisisekelo Ukushiswa kwe-induction isimiso ziye zaqondwa futhi zisetshenziselwa ukukhiqizwa kusukela ku-1920s. Phakathi neMpi Yezwe II, ubuchwepheshe buye baqala ngokushesha ukuhlangabezana nezimfuneko eziphuthumayo zokulwa nenqubo yokushesha, enokwethenjelwa yokwenza izinsimbi zensimbi zomelele. Muva nje, ukugxila kumasu okukhiqiza aqinile nokugcizelela ekulawulweni kwekhwalithi okuthuthukisiwe kuye kwaholela ekubuyiseleni ubuchwepheshe bokungeniswa, kanye nokuthuthukiswa kokulawulwa kahle, sonke isimo esiqinile izimpahla zokushisa.
Ukulahleka kwe-Hysteresis kwenzeka kuphela ezintweni ezibucayi ezifana nensimbi, i-nickel, nezinye ezimbalwa kakhulu. Ukulahleka kweHysteresis kusho ukuthi lokhu kudalwa ukungqubuzana phakathi kwama-molecule lapho okokusebenza kukhiqizwa uzibuthe ohlangothini olulodwa, bese kuba kolunye uhlangothi. Ama-molecule angathathwa njengamazibuthe amancane ajika ngokujika ngakunye kokuqondisa kwamandla kazibuthe. Umsebenzi (amandla) uyadingeka ukuwaguqula. Amandla aguquka abe ukushisa. Izinga lokusetshenziswa kwamandla (amandla) liyakhuphuka ngezinga elikhuphukile lokuguqula (imvamisa).
Ukulahleka kwe-eddy-current kwenzeka kunoma yikuphi ukwenziwa kwempahla kunkambu kazibuthe ehlukahlukene. Lokhu kubangela isihloko, noma ngabe izinto zingenayo impahla kazibuthe evame ukuhlotshaniswa nensimbi nensimbi. Izibonelo zethusi, ithusi, i-aluminium, i-zirconium, insimbi engenasici engagqwali, ne-uranium. Imisinga ye-Eddy yimisinga kagesi eyenziwe isenzo soguquli kulokho okubalulekile. Njengoba igama labo lisho, zibonakala zigeleza zizungeze ama-swirls kuma-eddy ngaphakathi kwesisindo esiqinile sezinto. Ukulahleka kwe-Eddy-yamanje kubaluleke kakhulu kunokulahleka kwe-hysteresis ekushiseni kwe-induction. Qaphela ukuthi ukufudunyezwa kwe-induction kusetshenziselwa izinto ezingezona ezomlingo, lapho kungalahleki khona i-hysteresis.